Muraayadaha qoraxda The Indian Face - THE INDIAN FACE
Polar Qoryo / Buluug
Polar Qoryo / Buluug 44.95 €
Polar Qoryo / Madoow
Polar Qoryo / Madoow 44.95 €
Polar Diin / Cagaar
Polar Diin / Cagaar 44.95 €
Polar Madow / Casaan
Polar Madow / Casaan 44.95 €
Polar Dub / Brown
Polar Dub / Brown 44.95 €
Polar Madow / Madow
Polar Madow / Madow 44.95 €
Geed / Buluug Reef
Geed / Buluug Reef 44.95 €
Qoryaha / Madowga Madoow
Qoryaha / Madowga Madoow 44.95 €
Reef Camo / Madow
Reef Camo / Madow 44.95 €
Reef Brown Camo / Madow
Reef Brown Camo / Madow 44.95 €
Cagaar / Madow Reef
Cagaar / Madow Reef 44.95 €
Casaan / Madoow Reef
Casaan / Madoow Reef 44.95 €
Buluug / Madoow madow
Buluug / Madoow madow 44.95 €
Madow / buluug Reef
Madow / buluug Reef 44.95 €
Madow / Casaan cas
Madow / Casaan cas 44.95 €
Madow / Naxaas
Madow / Naxaas 44.95 €
Madow / Cagaar cagaaran
Madow / Cagaar cagaaran 44.95 €
Madow / Madoow Reef
Madow / Madoow Reef 44.95 €
Freeride Wood / Buluug
Freeride Wood / Buluug 44.95 €
Freeride Wood / Madow
Freeride Wood / Madow 44.95 €
Tortoise Freeride / Cagaar
Tortoise Freeride / Cagaar 44.95 €
Freeride Cagaar / Madow
Freeride Cagaar / Madow 44.95 €
Freeride Blue / Naxaas
Freeride Blue / Naxaas 44.95 €
Freeride Blue / Madow
Freeride Blue / Madow 44.95 €
Freeride Madow / Buluug
Freeride Madow / Buluug 44.95 €
Freeride Madow / Casaan
Freeride Madow / Casaan 44.95 €
Freeride Madow / Naxaas
Freeride Madow / Naxaas 44.95 €
Freeride Madow / Madow
Freeride Madow / Madow 44.95 €
Dillaacin Cunto / bunni
Dillaacin Cunto / bunni 44.95 €
Dillaac Cagaar Cagaaran / Madow
Dillaac Cagaar Cagaaran / Madow 44.95 €
Dillaac Madoow / Buluug
Dillaac Madoow / Buluug 44.95 €
Dillaac Madoow / Maar
Dillaac Madoow / Maar 44.95 €
Dillaac Madoow / Madow
Dillaac Madoow / Madow 44.95 €
Xuduuda Maariinka Camo / Madoow
Xuduuda Maariinka Camo / Madoow 44.95 €
Gorgor Xuduuda / Cagaaran
Gorgor Xuduuda / Cagaaran 44.95 €
Xuduuda Madoow / Buluug
Xuduuda Madoow / Buluug 44.95 €
Xuduuda Madoow / Maarta
Xuduuda Madoow / Maarta 44.95 €
Soohdinta Madow / Madow
Soohdinta Madow / Madow 44.95 €
Kahoa Tortoise / Madoow
Kahoa Tortoise / Madoow 44.95 €
Kahoa Cagaar cagaaran / Madow
Kahoa Cagaar cagaaran / Madow 44.95 €
Kahoa Madoow / Casaan
Kahoa Madoow / Casaan 44.95 €
Kahoa Madow / Naxaas
Kahoa Madow / Naxaas 44.95 €
Kahoa Madoow / Madow
Kahoa Madoow / Madow 44.95 €
Free Spirit Qoryo / Buluug
Free Spirit Qoryo / Buluug 44.95 €
Free Spirit Qoryo / Madoow
Free Spirit Qoryo / Madoow 44.95 €
Free Spirit Camo / Madow
Free Spirit Camo / Madow 44.95 €
Free Spirit Tortoise / Madoow
Free Spirit Tortoise / Madoow 44.95 €
Free Spirit Cagaar / Madow
Free Spirit Cagaar / Madow 44.95 €
Free Spirit Buluug / bunni
Free Spirit Buluug / bunni 44.95 €
Free Spirit Buluug / Madoow
Free Spirit Buluug / Madoow 44.95 €
Free Spirit Madow / buluug
Free Spirit Madow / buluug 44.95 €
Free Spirit Madow / Casaan
Free Spirit Madow / Casaan 44.95 €
Free Spirit Dub / Brown
Free Spirit Dub / Brown 44.95 €
Free Spirit Madow / Cagaar
Free Spirit Madow / Cagaar 44.95 €
Free Spirit Madow / Madow
Free Spirit Madow / Madow 44.95 €
24 SAACAD BIXIS AH
Oxygen Edition Cirro / Buluug
Oxygen Edition Cirro / Buluug 19.99 € 54.95 €
Polar Qoryo / Madoow 38.99 € 64.95 €
Togoise Bondi Green
Togoise Bondi Green 23.99 € 40.00 €
Freeride Spirit Madow / Cagaar
Freeride Spirit Madow / Cagaar 38.99 € 64.95 €
Polar Madow / Casaan 38.99 € 64.95 €
Xaragada jilicsan ee Southcal
Xaragada jilicsan ee Southcal 23.99 € 40.00 €
Ventura Madow / Cagaaran
Ventura Madow / Cagaaran 29.99 € 49.95 €
Free Spirit Qoryo / Madoow 32.99 € 54.95 €
Free Spirit Madoow / Casaan Cas
Free Spirit Madoow / Casaan Cas 32.99 € 54.95 €
Free Spirit Madow / Cagaar 32.99 € 54.95 €
Ventura Madow / Casaan Cas
Ventura Madow / Casaan Cas 29.99 € 49.95 €
Polar Caano / Madow
Polar Caano / Madow 38.99 € 64.95 €
Togoise buluug Bondi
Togoise buluug Bondi 23.99 € 40.00 €
Oxygen Daabacaadda Xanuunka Buluugga / Casaanka
Oxygen Daabacaadda Xanuunka Buluugga / Casaanka 32.99 € 54.95 €
Freeride Spirit Madow / buluug
Freeride Spirit Madow / buluug 38.99 € 64.95 €
Free Spirit Buluug / Madoow 32.99 € 54.95 €
Ventura Madow / Buluug
Ventura Madow / Buluug 29.99 € 49.95 €
Freeride Spirit Qoryo / Buluug
Freeride Spirit Qoryo / Buluug 38.99 € 64.95 €
Buluug Pearl Urban Ruuxa
Buluug Pearl Urban Ruuxa 23.99 € 40.00 €
Barrel Cawlan / Cagaaran
Barrel Cawlan / Cagaaran 29.99 € 49.95 €
Qorrax-soo-baxa ragga iyo dumarka
Muraayadaha muraayadaha indhaha waa dhammaystir lagama maarmaan u ah nolol maalmeedka qof kasta. Gudaha The Indian FaceWaxaan aaminsanahay, mid ka mid ah noocyada muraayadaha indhaha ee ugu fiican, waxaan ku takhasusnay soo saarida wax soo saarka ugu fiican suuqa qiimaha ugu fiican. Mid kasta oo ka mid ah ururinta muraayadaha qorraxda ee internetka waxaan isku dayeynaa inaan horumarinno nafteena. Kii ugu dambeeyay ayaa markasta ka fiican kii hore, waayo? Sababtoo ah kooxdayada farsamada waxay u xuubsiibtaa oo u eegtaa muraayadaha indhaha si xadidan oo aan laga fiirsan, labadaba heerka muraayadaha iyo heerarka muraayadaha indhaha, si la mid ah kooxdayada naqshadeynta waxay doortaan oo doortaan moodooyinka ugu fiican ee suurtogalka ah iyo isku-darka. waxaad ka iibsan kartaa khadka tooska ah. Waxaan haynaa noocyo muraayadaha wareega ah, muraayadaha muraayadaha muraayadaha indhaha, muraayadaha muraayadaha, muraayadaha isboortiga, iyo tiro xulashooyin aan dhammaad lahayn oo kaa dhigaya inaad ku guuleysato dharka ugu fiican daqiiqad kasta iyo munaasabad kasta.
En The Indian Face waxaan jecel nahay inaan ku sharadno dadka firfircoon, ee maalin walba naftooda la tartama. Riyada bilaashka ah ee sidaada oo kale ah waxaan ku heynaa war wanaagsan: Dukaankayaga muraayadaha indhaha ee qadka tooska ah waxaan ku haysanaa moodooyin badan oo muraayadaha indhaha ah oo la heli karo polarkor loo saaray si aad u doorato midka aad ugu jeceshahay adoo og in indhahaagu had iyo jeer ka nabad galaan shucaaca waxyeelada leh.
Maxaa inaga duway noocyada kale ee muraayadaha indhaha?
Moodooyinka muraayadaha tooska ah ee internetka ayaa leh muraayadaha indhaha polarla saaray, ilaalinta UV400 oo iyagu waa CAT.3, taasi waa, heer shaandhayn iftiin dhexdhexaad ah oo iyaga siisa wadar ahaansho iyo ka dhigaysa mid ku habboon wakhti kasta oo maalinta iyo xaaladaha cimilada ah. Waxaan bixinaa muraayadaha indhaha oo aad u tiro badan polarfuushay (gaar ahaan) inaad u kacdo buuraha, si aad ugu tagto xeebta, aad barafka, ku ciyaarto isboortiga hawada furan ama aad si fudud u qaado fiiri magaalo badan. Qaabkeeda avant-garde ayaa ku habboon in lagu daro nooc kasta oo ka mid ah ciyaaraha Ragga iyo dumarka.
Waa maxay muraayadaha indhaha polarla saaray Sidee muraayadaha indhaha u shaqeeyaan polarxirtay?
Waa muraayadaha indhaha oo muraayadaha indhaha ay yihiin polarfuulay. Isaga polarkor loo saaray waa shaandho vertical taas oo ka celisa falaadhaha ileyska qorraxda ee indhaheenna u soo gaagaya, tusaale ahaan, marka fallaaraha qorraxdu ka muuqdaan barafka, biyaha badda ama laamiga. Faa'iidada ugu weyn ee muraayadaha indhaha polarkor loo saaray waa in aragtidaadu ka dhigtaa mid raaxo leh oo dabacsan.
Muraayadaha qoraxda polarHoisted had iyo jeer waxay noqon doontaa ikhtiyaarkaaga ugu fiican, waana muhiim inaad iibsato iyaga oo ay caddeeyeen Midowga Yurub iyo ilaalin UV 400 ah. polarHoused ma noqon doonto mid u qalma inuu kaa ilaaliyo qorraxda. Haddii aad rabto inaad xirato muraayadaha indhaha ugu fiican, ka fikir kuwa ku habboon adiga, muraayadaha muraayadaha laba jibbaaran, ama muraayadaha wareega. Ta saddexaad, ka fikir hawsha aad qaban doontid, haddii ay tahay gudaha iyo dibedda, haddii ay tahay maalin ama habeen, haddii ay tahay xagaaga ama jiilaalka; arrimahaas oo dhan waxay saameyn ku leeyihiin go'aankaaga marka aad iibsaneyso muraayadaha indhaha polarxardhay.
Maxaan u sameysannaa muraayadaha indhaha Polarindha-indheeyay Nin iyo Muraayadaha indhaha PolarNaag qaawan? Faa'iidooyin noocee ah ayey leeyihiin?
Faa'iidada ugu weyn ee muraayadaha indhaha polarhuur waa in ay bixiyaan aragti aan milicsiga. Uguyaraan kuwa nalka toosan ee ugu badan soo noqnoqda, sidaan ka faallaynay.
Muraayadaha indhaha oo leh polarkiciyey waxay bixisaa fiiqnaan weyn iyo heer sare oo isbarbardhig ah.
Waxay yareeyaan baalasha indhaha iyo indhaha, iyagoo siinaya midabeyn dabiici ah iyo mid aasaasi ah.
Miiraha muraayadaha indhaha polarized waxaa lagu dari karaa shaandheeyeyaasha kale ee muhiimka ah, sida miirayaasha iftiinka muuqda iyo shaandhada UV, oo sharcigu u baahan yahay, si ay u bixiyaan difaac buuxa.
Si la mid ah, waxaan si kooban kuugu sheegeynaa astaamo farsamo oo ah muraayadaha muraayadaha indhaha polarindha indheeyay taas oo adiga xiiso kuu yeelan karta:
Muuqaalka iftiinka Ultra-ka ee ka sameysan PC ama polycarbonate. Polycarbonate waxaan ku isticmaalnaa muraayadaha indhaha polarHoisted waa tayada ugu fiican ee ka jira suuqa, adkaysi leh, aad u fudud oo raaxo leh.
Qaar badan oo ka mid ah looxyadayada laga heli karo dukaankeenna muraayadaha indhaha ee internetka waxay leeyihiin 5-bar oo ah tiirarka si ay u gaaraan adkeysi weyn marka la eego waxqabadka ugu sarreeya. Muraayadaha muraayadaha indhaha waa la furi karaa waana la xiri karaa kumanaan jeer, sidaa darteed waa muhiim in la helo leelal tayo sare leh oo awood u leh in ay u babac dhigaan waqtiga.
Marka la sharaxo qaybta farsamada ee muraayadaha indhaha ragga iyo muraayadaha indhaha, waxaan isku dayi doonaa inaan sharaxno waxa ka dambeeya qaabeynta qaabkeena ugu dambeeyay. Miyaynu samaynnaa muraayadaha casriga ah, muraayadaha muraayadaha muraayadaha indhaha, muraayadaha wareega, muraayadaha indhaha?
En The Indian Face waxaan had iyo jeer si gaar ah uga walwalsanahay qurxinta. Haa, bilicsanaanta. Waxaan u fahansanahay nolosha inay tahay mid la isku riixi karo ilbiriqsi walbo gudaheeda taasna, waxay la macno tahay, sidoo kale isku soo ururin daqiiqad kasta oo bilic leh oo aan ku dhownahay, haddii aan ka fekereyno xirashada muraayadaha indhaha polarfuulay si aad ugu tagto berrinka, ugu raaxaysatid socodka buuraha, ku qubeysato xeebta, dhammaystirto a ciyaaraha la taaban karo, athleisure o aan sugnayn, sidaa darteed ka mid ah buugyarahayaga muraayadaha indhaha waxaad ka heli doontaa muraayadaha wareega, muraayadaha laba jibbaaran iyo dhammaan noocyada muraayadaha casriga ah iyo muraayadaha casriga ah.
Kooxdayada naqshadeynta waxay fikradda ka dhiibtaan fikradda oo waxay ku dhaqmaan ficil ahaan, iyagoo gaaraaya muraayadaha indhaha ee ugu fiican polarWiishash suurtagal ah daqiiqad kasta iyo goob kasta. Marka, waxaan leenahay moodallo muraayadaha indhaha ah polarIyagu way isboorti badan yihiin sida moodooyinka kale ee muraayadaha indhaha ama muraayadaha casriga ah, had iyo jeerna waa moodello unisex ah, waxaan dhihi karnaa waxaa loogu talagalay hal dhibic oo dheeri ah oo muraayadaha haweenka ah.Sidii aruurinta hore, waxaan sii wadeynaa inaan helno muraayadaha muraayadaha caadiga ah, muraayadaha muraayadaha, iyo classics oo la socday astaanteena tan iyo markii la abuuray in ka badan 15 sano ka hor. Ugu dambeyntiina, ururintaan iyo kuwii kale ee hore, waxaan sidoo kale fiiro gaar ah u leenahay moodooyinka muraayadaha indhaha ee wareega ah ee aad aad nooga dalbaneysid sanadba sanadka ka dambeeya.
Dhammaan noocyadan noocyadu waxay ka jawaabaan hal ujeedo, inaad ka heli karto tusaalaha ugu habboon baahidaada gaarka ah mar walba. caadiga, reer magaal la'aanta, athleisure, cayaaraha dharka, muraayadaha indhaha polarHoists si fiican u shaqeeyaan dhammaan noocyada bilicsanaanta.
Miyaynu haynaa muraayadaha indhaha iyo muraayadaha indhaha?
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, gudaha The Indian Face, waqti ka waqti, waxaan bixinaa muraayadaha indhaha ee qaababka cusub iyo kuwii hore, sidaa darteed, haddii aad rabto inaad iibsato muraayadaha indhaha polarhuwatay, sida haddii aad rabto inaad bixiso muraayadaha indhaha polarindho indhayn, hubi inaad isha ku hayso wararka ku jira dukaankeenna muraayadaha indhaha ee internetka, fiiro gaar ah u yeelo barta muraayadaha indhaha, sidoo kalena iska qor joornaalkayaga si aad u ogaatid dalabyada muraayadaha indhaha.
Qeybtayada muraayadaha indhaha waxaad ka heli doontaa heshiisyada muraayadaha indhaha ee ugu fiican suuqa, haddii aad rabto inaad iibsato muraayadaha indhaha polarhuwatay, sida haddii aad rabto inaad bixiso muraayadaha indhaha polarxardhay. The Indian Face had iyo jeer waa qiimaha ugu fiican ee xulashadaada tayada leh Haa, kan ugu fiican waxaanan dhahnaa waa wax lagu faani karo, aad ayaan ugu faraxsanahay shaqada aan qabanno, shaqada qof kasta oo ka mid ah dadka ka kooban kooxda farsamada iyo naqshadeynta ay sameeyaan si ay kuugu soo bandhigaan dalabka ugu fiican uguna badan ee suuqa. Haddii aad raadineyso inaad iibsato muraayadaha indhaha, haddii aad raadineyso dukaanka muraayadaha ee khadka tooska ah ee internetka, haddii aad raadineyso qalabka muraayadaha indhaha, haddii aad rabto inaad iibsato muraayadaha indhaha polarhuuriyay ama siiyay muraayadaha indhaha polarindho qabad, haddii aad rabto muraayadaha wareega, muraayadaha muraayadaha muraayadaha indhaha, muraayadaha moodada, muraayadaha casriga ah, waxaan nahay sumaddaada tixraaca.
Maanta, gudaha The Indian Face waxaan bixinaa aruurinta quruxda badan ee muraayadaha wareega, muraayadaha muraayadaha muraayadaha indhaha, muraayadaha casriga ah, muraayadaha indhaha ... oo kooban
Muraayadaha ugu fiican ee dhammaan noocyada iyo qaababka! Miyaad horay uga iibsatay dukaankayaga muraayadaha indhaha ee internetka? Haddii aadan wali sameyn, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad fiiriso aruurinta muraayadaha indhaha polarHadda booqo bartayada muraayadaha qorraxda, si aad u doorato kuwa aad ugu jeceshahay oo aad ugu habboon tahay qaab nololeedkaaga. Sidaad u aragto, waxaan nahay kuwa jecel isboortiga, waxqabadka iyo moodada. Tani waxay sifiican uga muuqataa dukaankayaga muraayadaha indhaha.
Adiga ayaa isku arki kara adiga oo booqanaya dhammaan qeybaha ay ka kooban tahay qalabka muraayadaha indhaha! Waxaan kuu balan qaadeynaa inaad ku xiiseyn doonto muraayadaha indhaha ee kala duwan polarHoists waxaan bilownaa sanad walba, oo loogu talagalay isboortiga, oo loogu talagalay xiisaha. Ka faa'iideyso inaad ku iibsato muraayadaha indhaha muusikadayada polarQalabka isboortiga iyo qalabka, had iyo jeer tayo leh, oo had iyo jeer moodada ah U diyaargarow waxyaabaha ugu fiican uguna xiro mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee muraayadaha muraayadaha indhaha ah ee halkaas yaal!
Ma ogtahay sida ay muhiimka u tahay in la iibsado muraayadaha indhaha?
Muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa ka mid ah qalabka loogu isticmaalka badan yahay adduunka. Iyagu ma kala soocna da 'ama jinsi, waxaana si weyn ugu taliyay dhakhaatiirta ku xeel dheer, labadaba maalmaha qoraxda, sida xilliga qaboobaha iyo maalmaha daruuraha oo aan kala sooc lahayn. Sidoo kale, xidho muraayadaha indhaha polarized waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah lebbiska ugu fiican ee dad badan, sidaa darteedna, maanta, muraayadaha ugu fiican ayaa ah kuwa fuliya labadan hawlood: moodada iyo ilaalinta.
Khubaro badan ayaa qaba fikirka ah in noocyada muraayadaha indhaha ee kaladuwan ay shaqo layaableh u hayaan bulshada iyaga oo siinaya xulasho iyo noocyo badan iyagoo baraya muhiimada xirashada muraayadaha indhaha. polarLa sudhay wakhti kasta oo sanadka ka mid ah, oo maahan oo keliya xagaaga. Muraayadaha ugu fiican ayaa laga heli karaa dukaamada jirka iyo indhaha, iyo sidoo kale, dijitaal ahaan, khadka tooska ah, qiimaha caadiga ah ama xitaa laga dhimo goobaha muraayadaha indhaha ee kala duwan.
En The Indian Face waxaan noqonay dad jecel muraayadaha indhaha polarla saaray, gaar ahaan muraayadaha isboortiga iyo muraayadaha muraayadaha, ujeedkeennu waa inaan ku bixino muraayadaha ugu fiican suuragalka qiimaha ugu fiican. Sannadkii hore waxaan u hibeynay nafteena inaan sahaminno muraayadaha cusub ee horseeday naqshadaha aadka u xiisaha badan ee muraayadaha wareega iyo muraayadaha muraayadaha. Tani waxay si fiican u dhigtay astaanta ka soo horjeedda tartankeena. Sidaa darteed, khubaro kala duwan iyo joornaallo ayaa naga mid ah muraayadaha indhaha ee ugu fiican maanta Spain, gaar ahaan qaybaha isboortiga iyo isboortiga caadiga ah, taas oo ah waxa aan ku takhasusay.
En The Indian Face waxaan u taaganahay bixinta qurxinta, ilaalinta iyo qaabka isboortiga. Muraayadaha muraayadaha indhaha waxaa dhiirrigeliya falsafadeena nooca. Annagu si fudud uma nihin astaanta muraayadaha qorraxda ee tooska ah, waxaan nahay dhiirrigeliyeyaal naqshadeeya agabyo isboorti oo loogu talagalay kuwa kale ee tacliinta u leh, ruuxyada kale ee bilaashka ah, oo doonaya inay kula socdaan mid kasta oo ka mid ah edbinta isboortiga ee aad sameyso.
Waxaad ka heli doontaa bakhaarkayaga muraayadaha indhaha oo laga heli karo khadka tooska ah, shaki la'aan, waxaan kuu sheegaynaa, adigoon ka baqayn inaad khalad noqoto, inay tahay mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu iibsado muraayadaha indhaha maanta. Waqtigaan la joogo, waxaan lashaqeynaa daraasiin ciyaartooy ah kuwaa oo ah taageerayaasha muraayadaha indhaha casriga ah sida aan nahay. Sida summad muraayadaha indhaha, muraayadaha indhaha polardusha sare iyo qalabka isboortiga oo aan soo jirnay muddo ka badan 15 sano, The Indian Face waxay ku faantaa inay xilliyo soo bandhigto muraayad ballaadhan oo casri ah oo ku habboon magaalooyinka iyo dabeecadda labadaba. Waxaa caadi ahaan loo maleynayaa in muraayadaha ugu fiican aysan jirin, laakiin waxaan aaminsanahay si kale. Dukaankayaga muraayadaha indhaha ee tooska ah iyo dukaanka waxaad shaki la'aan ka heli doontaa xulashooyin aan qummanaan ahayn oo kaa yaabin doona adiga isla markaana kugu soo saari doona dareen aan laga soo kaban karin oo ah inaad u baxdo ku ciyaarista isboortiga iyo adduunka oo dhan sahamin adigoo raadinaya waxyaabo cusub.
Xaqiiqdii gudaha The Indian Face Taasi waa ujeedkeena ugu weyn, inaan si dhab ah ula tartano noocyada kale ee muraayadaha indhaha, isla markaana aan ku soo bandhigno tayada ugu wanaagsan ee suuqa. Muraayadahayada muraayadaha casriga ahi runtii kama baxaan qaab ahaan, maxaa yeelay waxaa loogu talagalay inay socdaan sannado iyo sannado. Macno malahan haddii aad jeceshahay muraayadaha wareega badan ama muraayadaha muraayadaha muraayadaha indhaha ama muraayadaha casriga ah, muraayadaha muraayadaha indhaha waxaan shaki la'aan ka heli doontaa xulashada ugu fiican naftaada ama hadiyad ahaan. Qaybta dambe waa sida saxda ah ee aan jeclaan lahayn inaan xoogga saarno, hadda, muraayadaha indhaha polarized waa ikhtiyaar hadiyadeed aad u fiican kuwa aan jecel nahay iyadoon loo eegin inay jecel yihiin muraayadaha indhaha maadaama ay had iyo jeer yihiin qalab shaqeynaya oo aad uwanaagsan oo aan dhamaanteen jecel nahay inaan helno.
Xeerar malaha, xuduudo malahan. Kaliya ruuxa Hindiya
En The Indian Face waxaan ku faaneynaa inaan bixino aruurinta muraayadaha indhaha polarHoolalka loogu talagalay inay kugula socdaan dhammaan dalxiisyadaada iyo xiisaha ciyaaraha. Waxaan ku faaneynaa inaan nahay mid ka mid ah muraayadaha indhaha ee ugu fiican suuqa, gaar ahaan waxaan diirada saareynaa horumarinta moodooyinka muraayadaha indhaha polarizas ragga, labadaba waqtiyadaada isboorti iyo maalinba maalinta ka dambeysa. Muraayadaha indhaha polarRagga dusha sare waxay si fiican ugu habboon yihiin baahiyaha ciyaartoyda waxqabadka sare leh ee xirfadaha kala duwan oo ay ku jiraan orodka, baaskiil wadista, iyo cayaaraha kale ee ba'an iyo xiisaha leh. Waxaan ku faraxsanahay inaan dhahno waxaan bixinaa muraayadaha indhaha ee ragga ee ugu fiican ee laga heli karo suuqa, gaar ahaan qiimahooda / tayada tayada iyo qaabka ay u dhameystiraan a ciyaaraha la taaban karo, tan noqo athleisure o aan sugnayn.
Waxaan bixinaa muraayadaha ka sameysan polycarbonate ee iska caabinta ugu badan iyo iftiinka. Calaamadeena ayaa naqshadeynaysay isboorti iyo moodal indho indheyn ah in kabadan 15 sano sidaa darteed, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aaminto qibradeena, taas oo ay aqoonsanyihiin macaamiisheena sanadba sanadka ka dambeeya, oo aad ku iibsato muraayadaha indhaha ee websaydhka qaab fudud, raaxo leh oo ammaan ah. Dukaankayaga muraayadaha ee qadka tooska ah ee loogu talagalay ragga waxaan dammaanad ka qaadeynaa muraayadaha indhaha oo aad u tiro badan, mid walboo ka mid ah oo leh difaac UV400.
En The Indian Face Waxaan ku dhalannay ciyaartooy ujeeddadeedu tahay abuuritaanka agabyada isboorti ee ugu wanaagsan iyo muraayadaha indhaha ragga ee ugu fiican suuqa. Hadda waxaan ka mid nahay noocyada muraayadaha indhaha ee muraayadaha indhaha oo leh heerarka tayada ugu fiican, sidoo kale, sida aad ka arki karto dukaankeenna internetka, waxaan leenahay qaab u gaar ah koofiyadaha moodada ragga, saacadaha iyo muraayadaha indhaha. Waxaan bixinaa dhammaan noocyada muraayadaha indhaha ee casriga ah iyo qalabka isboortiga oo si gaar ah loogu talagalay in lagu adkeysto xaaladaha cimilada ee kala duwan marka Ruuxeenna Hindida ah ay ku dhaqmaan isboorti xiisa leh iyo isboorti xad dhaaf ah. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato Goobta Muraayadaha Muraayadaha ee ragga oo aad soo iibsato labada doorbid ee aad doorbideyso, si aad u daryeesho aragtidaada oo aad had iyo jeer moodada u noqoto, haddii aad ku tababbarto isboorti aad jeceshahay ama haddii aad u rabto maalin kasta.
Waa maxay muraayadaha indhaha polarxirtay?
Waa muraayadaha indhaha oo muraayadaha indhaha ay leeyihiin shaandho vertical Waxay xannibtaa falaaraha iftiinka ee qorraxda ee aragga u gaara.
Waa maxay faa'iidada ugu weyn ee muraayadaha indhaha polarxirtay?
Faa'iidada ugu weyn ee muraayadaha indhaha polarkor loo taagay ayaa ah in aragtidaadu ka dhigto mid wacan oo dabacsan, iyadoo kaa ilaalinaysa shucaaca ay qorraxdu soo saarto. Sidan oo kale, waxay siiyaan ragga iyo dumarka suurtagalnimada in lagu fuliyo waxqabadyo bannaanka iyadoo la ilaalinayo iyo aragti deg deg ah.
Faa'iidooyinka kale maxay leedahay iibsashada muraayadaha indhaha polarhuwiyay ragga?
Muraayadaha qoraxda polarWiishka dadku waxay bixiyaan aragti aan milicsiga lahayn, gaar ahaan kuwa jiifka ah.
Muraayadaha qoraxda polarSariirayaasha labku waxay bixiyaan fiiqnaan weyn iyo heer sare oo isbarbardhig ah.
Muraayadaha qoraxda polarNinku wuxuu hoos u dhigaa indha fiiqista iyo baalasha indhaha isagoo siinaya midabeyn dabiici ah iyo mid aasaasi ah.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, muraayadaha muraayadaha ayaa miiraya polarWiishka ninku waa lagu dari karaa shaandheeyeyaasha kale ee muhiimka ah, sida miirayaasha iftiinka muuqda iyo shaandhada UV, oo ay qasab ku tahay sharcigu, si ay u siiyaan ilaalin dhammaystiran.
Muraayadaha indhaha polarragga huwani waa dookhayga ugu fiican?
Muraayadaha qoraxda polarRagga dhererku had iyo jeer waxay noqon doonaan xulashadaada ugu fiican. Xusuusnow inay lama huraan tahay in la xaqiijiyo inay aqoonsan yihiin Midowga Yurub iyo ilaalinta UV 400. Kuwa kale qiimo uma lahan doonaan inay kaa ilaaliyaan qorraxda oo aad aragtidaada ka dhigto mid deggan oo kacsan isla markaa, sidaas darteed badanaa waxaa loogu talagalay isticmaalka waxqabadyada isboortiga ee dibedda iyo ciyaaraha xiisaha leh.
Sida loo doorto muraayadaha indhaha ugu fiican polarnin la saaray?
Haddii aad rabto inaad xirto muraayadaha indhaha ee ragga ugu fiican, ka fikir kuwa ku habboon adiga, muraayadaha muraayadaha ragga, ama muraayadaha wareega ee ragga. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa waxqabadka aad sameyn doontid, haddii ay tahay gudaha ama hadday tahay bannaan, hadday tahay maalin ama habeen, hadday tahay xagaa ama jiilaal. Dhammaan arrimahan ayaa saameyn ku leh go'aankaaga marka aad wax ka iibsaneyso dukaankayaga muraayadaha indhaha ee ragga.
Maxaan maskaxda ku hayaa markaan iibsanayo muraayadaha indhaha ragga?
Iibsiga muraayadaha indhaha ee ragga ayaa noqon kara mid aad u fudud haddii aad taqaanid sida loo sameeyo. Ugu horreyntii, waa inaad iibsataa muraayadaha indhaha ee ragga oo buuxiya shahaadooyinka ku habboon ee ay ansaxisay Midowga Yurub. Intaa waxaa dheer, waa inaad horey u sii xaqiijiso ka hor intaadan iibsan inay yihiin muraayadaha indhaha polarnin fuushan ilaalin UV400, iyo sidoo kale, waa muraayadaha tooska ah ee ragga ee aan ku bixinno degelkeenna. Waa lagama maarmaan inaad soo iibsato muraayadaha indhaha ee ragga ugu fiican si aad runtii uga ilaaliso falaadhaha qorraxda.
Sidoo kale, marwalba maskaxda ku hayso qaabkaaga shaqsiyeed kahor intaadan iibsan muraayadaha indhaha ee ragga. Waxaad noqon kartaa qaabka nin xirta muraayadaha muraayadaha indhaha, muraayadaha muraayadaha laba jibbaaran, ama muraayadaha casriga ah. Dad badan ayaa aamminsan in ragga aysan waqti ku lumin doorashada nooca alaabada aan caadiga ahayn ama qalabka isboortiga ee ay adeegsadaan, hase yeeshe, ujeeddadani waa mid aan sax ahayn.
Rag badan miyay iibsadaan oo xirtaan muraayadaha indhaha?
Muraayadaha muraayadaha casriga ah ee ragga waa mid ka mid ah qalabka loogu iibsiga badan yahay qaaradda Yurub, innaguna, haddii aan nahay dukaanka muraayadaha indhaha ee ragga, waxaan maalin walba iska hubinnaa, halkaasoo boqolaal macaamiil ahi ay ku kalsoon yihiin tayada wax soo saarkeenna oo aan u heellan nahay iibsashada. naftooda, iyo inay siiyaan kuwa ay jecel yihiin.
Gudaha The Indian Face ma iibsan karaa muraayadaha indhaha ee ragga?
Dukaankayaga muraayadaha indhaha ragga waxaad ka heli doontaa badeecooyin kala duwan iyo dalabyo badan oo loogu talagalay muraayadaha indhaha ragga iyo qalabka isboortiga ee adiga kugu habboon, oo leh waxqabadka ugu sarreeya iyo qiimaha ugu sarreeya. Way fududahay inaad ka iibsato muraayadaha indhaha ee websaydhka adoo leh nabadgelyo iyo raaxo buuxda.
Gudaha The Indian Face ma ka heli karaa heshiisyo ku saabsan muraayadaha indhaha ee ragga?
Qeybteenna bannaanka waxaad ka heli doontaa Bixinta Muraayadaha Muraayadaha ragga oo la jaan qaada dhammaan baahiyaha macaamiisheena. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad ku soo biirto joornaalkeenna, waxaan kuu soo diri doonnaa dalabyo iyo dallacsiinno aanad rumaysan karin. Bixinta muraayadaha indhaha ee ragga ayaa lagu dabaqayaa alaabada la xushay iyadoo loo eegayo qayb kasta.
Waa maxay muraayadaha indhaha ragga ugu fiican?
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga ugu fiican ayaa ah kuwa lagu soo saaray waxqabadka ugu sarreeya qaybtooda, oo leh qalab iska caabin ah laakiin fudud. Gudaha The Indian Face Qiyaasta ugu weyn ee qiimahayagu waa saamigayaga tayada / qiimaha, oo laga aqoonsan yahay suuqa iyo tartankeenna sida hoggaamiyeyaasha arrintan la xiriira. Marka, kuwa aad ka helayso dukaankeenna internetka ayaa ah muraayadaha ugu fiican ragga ee suuqa ku jira, oo ay ansaxisay oo ay caddeysay Midowga Yurub.
Sidee looga helaa muraayadaha indhaha ragga The Indian Face?
Muraayadaha muraayadaha ee ragga waxay leeyihiin astaamaha soo socda:
Muraayadaha muraayadaha indhaha oo leh qaab la qabsan karo iyo qaab unisex ah.
Muraayadaha muraayadda casriga ah ee ragga oo leh Lens TAC PolarQeexid Sare
Muraayadaha muraayadaha indhaha oo leh muraayadaha indhaha CAT.3 iyo ilaalinta UV- 400.
Muraayadaha muraayadaha dharka ee ragga oo leh qaab ka sameysan polycarbonate ee iftiinka iyo iska caabinta ugu badan.
Muraayadaha qoraxda polarninku wuxuu ku qaadaa fiilooyin adag oo dheeri ah
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee muraayadaha indhaha polarWareegyo cabbir iyo midabyo kala duwan leh.
Ururinta muraayadaha indhaha polarnin la saarey wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan iyo midabbo badan. Diiwaankayaga muraayadaha indhaha ee ragga waxaad ka heli doontaa muraayadaha wareega ee ragga, muraayadaha muraayadaha laba jibbaaran ee ragga iyo dhammaan noocyada muraayadaha indhaha ee casriga ah iyo muraayadaha moodada ragga.
Sidee u keydsan yahay muraayadaha indhaha The Indian Face?
The Indian Face waa astaan ​​dijitaal ah oo muraayadaha indhaha ah polarnin sarreysa, waxaan iibineynaa dhammaan noocyadeena muraayadaha indhaha polarku xareysan dukaankayaga muraayadaha indhaha ee ragga. Waxaan sidoo kale joognaa qaar ka mid ah kuwa indhaha lagu aqoonsan yahay ee Spain oo dhan. Waxaan bixinaa muraayadaha indhaha ee ragga oo leh waxqabadka ugu sarreeya ee suuqa, oo tayo fiican leh. Boggayaga internetka waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada muraayadaha indhaha ee ragga, gaar ahaan qaybta ka bixitaanka muraayadaha indhaha ee ragga.
En The Indian Face Waxaan baranaynay optics-ka iyo isbeddellada sanado si aan u abuurno aruurinta muraayadaha wareega ee ragga iyo muraayadaha muraayadaha ee ragga, taas oo sanadba sanadka ka dambeysa ka sarreysa rajada qof walba. Labadaba ciyaartoy badan oo naftooda u hibeeyay wax iibsashada, iyo sidoo kale qaab nololeedka aan qabatinka lahayn ee balwadaha magaalooyinka ee naga soo iibsaday waxay aad ugu qanacsan yihiin iibsashada muraayadaha indhaha polarRagga ized iyo, sidaa darteed, waxay kugula taliyeen muraayadaha ragga ragga dukaankayaga muraayadaha indhaha ee ragga.
Faa'iidooyinka iyo habka loo iibsado muraayadaha indhaha polarnin fuushan The Indian Face:
Soo iibso muraayadaha indhaha ee ragga oo leh waxqabadka ugu sarreeya suuqa.
Iibso muraayadaha tooska ah ee loogu talagalay ragga si nabadgelyo leh oo dhaqso leh barnaamijyada la xaqiijiyay sida kuwa aan ku bixinno mareegteena
Booqo dukaankeenna muraayadaha indhaha oo fiiri uruurintayada cusub, adigoo awood kuu siinaya inay kugu hagaan dharka cusub.
Gali gawaaridaada wax iibsiga ee muraayadaha indhaha ee ragga ee kaydiya isboortiga iyo qalabka caadiga ah ee aad ugu jeceshahay, oo ay ku jiraan muraayadaha muraayadaha ragga ee aad doorbideyso oo aad ugu habboon tahay qaabka isboortigaaga.
Haddii aad haysato lambar qiimo dhimis ah, waad ku dalban kartaa iibsiga qaybta "gala sicir dhimista", qaabkan waxaad ka iibsan kartaa muraayadaha muraayadaha ee internetka oo leh dalabyo gaar ah, sida ay dhici karto. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad ka iibsato muraayadaha indhaha ragga qeybta muraayadaha indhaha, halkaas oo aad ka heli doonto fursado badan oo muraayadaha indhaha ah oo ay ku jiraan muraayadaha wareega ee ragga, muraayadaha muraayadaha laba jibbaaran, muraayadaha moodada ragga iyo muraayadaha indhaha ragga casriga ah, dhammaantoodna leh qaab isboorti, ku habboon halista iyo waxqabadka ugu sareeya.
Si loo dhammeeyo, si fudud u faahfaahin macluumaadkaaga maraakiibta, buuxi bixinta waxaanan kuu soo diri doonaa muraayadaha indhaha oo cusub polarKu dheji nin cinwaanka aad tilmaamayso.
Xusuusnow in qiimaha hoose uusan macnaheedu ahayn tayada hoose. Xaqiiqdii, waxaad ka iibsan kartaa muraayadaha indhaha ragga oo qiimo jaban ku leh dukaankeenna internetka ee www.theindianface.com, gaar ahaan qeybta ragga ee muraayadaha indhaha.
En The Indian Face waxaan leenahay muraayadaha indhaha oo casri ah muraayadaha indhaha polarla saaray nooc kasta oo xaalado ah, iyo looxyo iftiin xad dhaaf ah oo loogu talagalay dareen fiican iyo raaxo.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad gasho dukaankayaga muraayadaha indhaha ee ragga si aad uhesho ikhtiyaarro ku habboon oo la jaan qaadi kara dhammaan baahiyahaaga sida cayaaraha casriga ah: waxaad ka heli kartaa muraayadaha muraayadaha laba jibbaaran ee ragga, muraayadaha wareega ee ragga, muraayadaha indhaha ee ragga iyo muraayadaha indhaha casriga ah, oo aad u naqshadaha labka ah
Ha iloobin inaad soo booqato muraayadaha indhaha ee ragga! Waxaad dooran kartaa xulashooyinka ugu habboon ee leh dalabyo ku saabsan alaabada aan caadiga ahayn iyo isboortiga, iyo sidoo kale ragga ugu fiican muraayadaha muraayadaha. Xullo waxyaabaha aad ugu jeceshahay oo aad ku aragto xiisaha!
The Indian Face Waxaan u qaabeynay noocyo kala duwan oo dookh haween ah oo loogu tala galay dumarka iyo gabdhaha da 'kasta leh si ay ugu raaxaystaan ​​dhacdooyinka aan caadiga ahayn iyo kuwa isboorti ee qorraxda, iyadoo laga ilaalinayo 100% shucaaca' ultraviolet rays 'una muuqda qurux leh moodooyin gaar ah oo aan laga adkaan karin oo ah muraayadaha indhaha haweenka.
Iibsiga muraayadaha tooska ah ee loogu talagalay haweenka waa riyada gabar kasta oo jecel nolosha, moodada iyo xiisaha ciyaaraha. Waxay noqdeen mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan, faa iidada iyo quruxda badan ee aad ku kabi karto dharkaaga, gaar ahaan haddii aad jeceshahay moodada, isboortiga bannaanka iyo athleisure. Shaki kuma jiro, muraayadaha haweenka ayaa fuliya shaqooyin aan xad lahayn oo nolol maalmeedka gabadha raba inay daryeesho caafimaadkeeda indhaha oo ay u dhameystirto labiskeeda si la yaab leh, annagana waa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee muraayadaha indhaha haweenka.
En The Indian Face Waxaan ku faaneynaa iskaashi aan la leenahay ciyaartooyda qeybaha dumarka ee dhamaan noocyada kala duwan ee ciyaaraha xiisaha leh iyo cayaaraha xad dhaafka ah. Qaar ka mid ah safiiradayada ugu caansan uguna caansan, oo ay ka mid yihiin Lucía Martiño, waxay doorteen oo ay caddeeyeen muraayadaha indhaha ee haweenka iyo astaanteenna inay yihiin kuwa ugu wanaagsan suuqa maanta. Sida iyada oo kale, xulkeenna ballaaran ee haweenka cayaaraha ayaa nagu aaminay annaga iyo khibradeena muraayadaha indhaha ee haweenka si aan ugu isticmaalno inta ay socdaan iyo tartamada isboortiga.
Safiiradayada isboorti ayaa yaqaana sida loo doorto The Indian Face iyada oo ah mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee muraayadaha indhaha haweenka, oo ka mid ah dhammaan noocyada muraayadaha indhaha ee haweenka ee hadda jira. Siday iyagu naftooda noogu sheegeen: "muraayadaha indhaha oo keliya kuma filna." Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa noo qirtay inay had iyo jeer doortaan dhowr lammaane oo leh qaabab iyo qaabab kala duwan. Qaarkood waxay doorbidaan muraayadaha wareega ee haweenka qaarna waxay doorbidaan muraayadaha muraayadaha ee haweenka, laakiin waligood guriga ugama tagaan. Muraayadaha muraayadaha casriga ah ee haweenka ayaa ah kaabista ugu fiican haddii sheygaagu uu baxo oo uu ku raaxeysto banaanka.
Ka shirkad ahaan muraayadaha indhaha ee haweenka iyo agabyada isboortiga, waxaan leenahay 15 sano oo waayo aragnimo ah oo muujinaya inaan ka go'nahay waaxdeena, iyo inaan taageerno ciyaartooyda adduunka oo idil ee u baahan inay la tartamaan oo ay ku raaxaystaan ​​isboortigooda sida ugu fiican. qalabyada iyo muraayadaha indhaha ee ugu fiican haweenka iyo gabdhaha, oo leh waxqabadka ugu sarreeya, muraayadaha ugu fudud uguna adkaysiga badan iyo midabada ugu badan ee la isku dari karo xilligan. Muraayadaha indhaha polarhaweenka indho-sarcaadka ah ayaa loogu talagalay si aad ugu isticmaali karto maalin-maalmeedkaaga, iyo sidoo kale markaad ku tababbarto cayaaraha aad ugu jeceshahay. Waxaad ka heli doontaa moodellada ugu fiican ee muraayadaha haweenka khadka tooska ah ee dukaankeenna muraayadaha haweenka iyo qaybta muraayadaha haweenka.
Haddii aad jeceshahay xiisaha, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato dukaamadeenna muraayadaha indhaha ee haweenka, halkaas oo aan ku siino noocyo kala duwan oo xulashooyin aan laga adkaan karin, oo ku dhiirrigelinaya ficil, dabeecad iyo isboorti. Ku dhiirran inaad ku noolaato caqabad kasta oo nolosha leh ruuxa xorta ah oo leh muraayadaha indhaha ee haweenka ugu fiican!
Dhamaan gabdhaha jecel isboortiga iyo moodada, waxaa laga helaa muraayadaha haweenka casriga ah The Indian Face. Waxaan ku siineynaa isku dhafka labada adduun mid kasta oo ka mid ah ururinta aan ku bixino dukaankeenna muraayadaha indhaha. Kuqabso kuwa aad ugu jeceshahay muraayaddaha muraayadaha ee haweenka oo ku arag ficil!
Miyaan ka iibsan karaa muraayadaha indhaha haweenka The Indian Face?
En The Indian Face Waxaan ku takhasusay qaabeynta muraayadaha indhaha haweenka si aan u abuurno uguna soo bandhigno muraayadaha haweenka ugu fiican suuqa. Naqshadahayagu waa Unisex, waxay la qabsan karaan dhadhanka dhagaystayaasha labka ah iyo waliba dhagaystayaasha dumarka ah. Taasi waxay tiri, wax soo saarkayaga wax soo saar waxaad ka heli doontaa moodello dumar ka badan kuwa kale. Su'aalo kasta oo aad qabtid, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad naweydiisid xasiloonida maskaxda oo dhameystiran.
Dukaankayaga internetka waxaan ku leenahay qayb ka baxsan qaybta muraayadaha indhaha ee haweenka taas oo bil kasta aan ka sameyno qiimo dhimis weyn si cayaartooydeena, kuwa aan qabatinka u lahayn ee reer magaalka ah iyo Ruuxyada Hindida ahi u soo booqan karaan, u dooran karaan una soo iibsan lahaayeen muraayadaha haweenka ee dhammaan noocyada, midabada iyo qaababka, tusaale , muraayadaha indhaha ee haweenka iyo muraayadaha muraayadaha ee haweenka.
Miyaan ku heli karaa muraayadaha indhaha haweenka iib ahaan The Indian Face?
Haddii aad raadineysid muraayadaha haweenka, qolkayaga muraayadaha indhaha ee haweenka waxaad ka heli doontaa xulasho ballaaran oo moodooyin leh iib soo jiidasho leh, oo aan ku bixinno dhammaan noocyada muraayadaha indhaha. polarnaag diiran Sidaa darteed waxaan ku darnaa muraayadaha wareega ee haweenka, muraayadaha muraayadaha haweenka, muraayadaha indhaha ee haweenka iyo muraayadaha casriga ah ee haweenka. Mid kasta oo leh qaab u gaar ah, ku habboon in laga hortago dhammaan noocyada xaaladaha cimilada xun, iyo gaar ahaan lagula taliyay in lagu barto isboortiga banaanka iyo, dabcan, in lagu xidho nolol maalmeedkaaga. Ha iloobin inaad aragto soo bandhigida muraayadaha indhaha ee haweenka oo laga heli karo websaydhkeena!
Ma iibsan karaa muraayadaha indhaha polarnaag la raray The Indian Face?
The Indian Face waa nooc Isbaanish ah oo ku takhasusay naqshadeynta, soo saarista iyo qeybinta muraayadaha indhaha polarDumarka dumarku leh waxqabad sare iyo qiimo / tayo wanaagsan. Dukaankayaga muraayadaha indhaha polardumarka qaawan ee khadka tooska ah waxaan ku siineynaa dhamaan Ruuxyada Hindida ah dalabyada ugu fiican ee haweenka muraayadaha indhaha iyo muraayadaha polarhoists loogu talagalay waxqabadka ugu sareeya. Waxaa laga heli karaa qaybtayada muraayadaha indhaha iyo qaybta muraayadaha haweenka.
Waa maxay faa iidooyinka iibsiga muraayadaha indhaha polarnaag la raray?
Soo iibso muraayadaha indhaha oo casri ah polarizadas mujer waa maalgashi xagga moodada laakiin, marka lagu daro, faa iidadiisa ugu weyni waa inay kaa caawiso inaad aragtidaadu ka dhigto mid wacan oo deggan. Muraayadaha indhaha polarHaweenka la kiciyey, waxay kaa ilaalinayaan shucaaca qorraxdu soo saarto, sidaas darteed waxay siinayaan dhammaan cayaartoyda suurtagalnimada in lagu fuliyo waxqabadyada bannaanka iyadoo la ilaalinayo iyo aragti deg deg ah.
Faa'iidooyinka kale maxay leedahay iibsashada muraayadaha indhaha polarloogu rakibey dumarka?
Muraayadaha qoraxda polarDumarka dumarku waxay bixiyaan aragti aan dhalaal lahayn.
Muraayadaha qoraxda polarKordhinta dumarka waxay siisaa farqi weyn
Muraayadaha qoraxda polarDumarka dumarku waxay bixiyaan midabeyn dabiici ah iyo mid aasaasi ah, sidaas awgeedna waxay yareynayaan ciribta indhaha iyo indha sarcaadka, iyagoo siinaya midabeyn dabiici ah iyo mid aasaasi ah.
Muraayadaha qoraxda polarhaweenka indho-sarcaadka ah ayaa lagu dari karaa shaandheeyeyaasha kale ee muhiimka ah, tusaale ahaan, miirayaasha iftiinka muuqda iyo miiraha UV, iyagoo siinaya daryeel dhammaystiran indhahaaga iyo aragtidaada.
Mid ka mid ah waxtarka weyn ee lebisashada muraayadaha indhaha polarHaweenka indho-sarcaadka ah ayaa ah inaad ka ilaaliso aragtidaada xaaladaha suuragalka ah intaad dharka u lebbisanayso, iyadoon loo eegin inaad jeceshahay in ka badan inaad gashato muraayadaha indhaha ee haweenka ama muraayadaha muraayadaha haweenka. Qaabka adigaa iska leh!
Maxay muraayadaha indhaha ee dumarka u yihiin qalab caan ku ah moodada haweenka?
Muraayadaha muraayadaha haweenka ayaa loogu talagalay inay si fiican u dhammaystiraan dharka haweenka ku raaxeysta waxqabadka banaanka, labadaba magaalada iyo baadiyaha. Maanta, haween aad u tiro badan ayaa fahansan baahida loo qabo inay xirtaan muraayadaha indhaha polarDul istaagay si loo ilaaliyo kubbadaha indhaha iyo aragga, gaar ahaan marka la ciyaarayo cayaaraha. Xaaladdan oo kale, kaliya muraayadaha indhaha polarnaag xirtay The Indian Face waxay ku siin karaan fiiqan run ah iyo firfircoonaan muuqaal ah.
Sideen ugu iibsan karaa muraayadaha haweenka qadka tooska ah?
Waxaa muhiim ah in la doorto noocyada ugu wanaagsan ee muraayadaha haweenka; Kaliya markaa waxaad damaanad qaadi doontaa inaad hesho alaab tayo leh. Had iyo jeer xusuusnow:
Ku soo iibso muraayadahaaga haweenka e-gacmeed la aqoonsan yahay ama ku kaydi muraayadaha indhaha ee tooska ah ee haweenka oo leh talooyin wanaagsan iyo dib u eegis, iyo sannado khibrad u leh qaybta.
Soo iibso muraayadaha haweenka ee dukaanka khadka tooska ah oo leh nidaam wax iibsi oo fudud, aamin ah oo raaxo leh si aad ugu hesho muraayadaha indhaha haweenkaaga waqtigooda, iyo xaalad ku habboon.
Waa muhiim in marka aad ka iibsaneyso muraayadaha indhaha ee haweenka aad waqti ku bixineyso akhrinta dhamaan astaamaha ay leedahay si aad runtii uga doorato muraayadaha haweenka ugu macquulsan dhamaan xulashooyinka laga heli karo internetka oo ay ka mid yihiin: Ilaalinta UV400, fiilooyin wax ku ool ah, looxyo miisaanka fudud iyo muraayadaha indhaha oo midowga Yurub ayiday.
Xagee ka iibsan karaa muraayadaha haweenka ugu fiican?
Iibsiga muraayadaha haweenka waa mid aad u fudud, haa. Kuwa ugu fiican ayaa lagu qeexay tayada / qiimaha saamigooda waxaadna ka heli doontaa dukaankayaga muraayadaha indhaha ee haweenka. Gudaha The Indian Face waxaan u huray dadaalkeena, maalinba maalinta ka dambeysa, naqshadeynta iyo soo saarida muraayadaha indhaha ee ugu fiican suuqa. Waxay ka badan yihiin 15 sano oo waayo-aragnimo ah abuurista aruurin ballaaran oo leh waxqabad sare oo muraayadaha haweenka casriga ah oo had iyo jeer ka sarreeya rajooyinka macaamiisheenna.
Xusuusnow: Waxaan haynaa muraayadaha haweenka ee muraayadaha indhaha si aad u iibsan kartid muraayadaha haweenka markasta oo aad rabto, adigoo raadinaya kuwa ku habboon qaabkaaga alaabooyinkeena kala duwan. Ku dhiirrasho inaad u ekaato mid qurux badan leh muraayadaha muraayadaha haweenka ee xilli ciyaareedkan adoo booqanaya qaybta muraayadaha indhaha ee haweenka. Macno malahan hadii qaabkaagu yahay muraayadaha indhaha ee haweenka ama muraayadaha isku dhafan ee dumarka! Waxaad hubtaa inaad hesho kuwa kugu habboon adiga.